Transparency Myanmar: 2019
279079 သည် သင်၏ Facebook အကောင့်ပြန်ဆည်ယူရန်ကုဒ် ဖ...
မင်္ဂလာပါ၊ U Myo ၂၀၁၉၊ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ အင်္ဂါနေ့ ရက် ညနေ ၂၀:၅၁ (UTC+06:30)တွင် သင်၏ Facebook စကားဝှက်ကို ပြောင်းခဲ့သည် ကိရိယာ: iPhone 8 Plus အိုင်ပီလိပ်စာ-: 103.231.94.151 ခန့်မှန်းတည်နေရာ: Rangoon, 06, MM သင် ဒါကိုလုပ်ခဲ့လျှင် သင်သည် ဤအီးမေးလ်ကို လျစ်လျူရှုနိုင်သည်။. သင် ဒါကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်၏ အကောင့်ကို လုံလုံခြုံခြုံထားပါ ကျေးဇူးတင်လျှက်၊ Facebook လုံခြုံရေးအဖွဲ့
မင်္ဂလာပါ၊ U Myo
၂၀၁၉၊ စက်တင်ဘာ ၂၄၊ အင်္ဂါနေ့ ရက် ညနေ ၂၀:၅၁ (UTC+06:30)တွင် သင်၏ Facebook စကားဝှက်ကို ပြောင်းခဲ့သည်
ကိရိယာ: iPhone 8 Plus
ခန့်မှန်းတည်နေရာ: Rangoon, 06, MM
သင် ဒါကိုလုပ်ခဲ့လျှင် သင်သည် ဤအီးမေးလ်ကို လျစ်လျူရှုနိုင်သည်။.
သင် ဒါကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ သင့်၏ အကောင့်ကို လုံလုံခြုံခြုံထားပါ
သင့် တောင်းဆိုမှုရှိ transparency.myanmar.mpt20@blogger.com သို့ ဒီမက်ဆေ့ကို ပို့ခဲ့သည်။
သင့်အကောင့်လုံခြုံစေရန်အတွက် ဤအီးမေးလ်ကို တစ်ဆင့်မပို့ပါနှင့်။ ပိုမိုလေ့လာပါ။
279079 သည် သင်၏ Facebook အကောင့်ပြန်ဆည်ယူရန်ကုဒ် ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ၊ U Myo သင်၏ Facebook စကားဝှက်ပြောင်းရန် တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိထားပါသည်။ အောက်ပါ စကားဝှက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းပါ - 279079 အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု အနေဖြင့် သင့်စကားဝှက်ကို တိုက်ရိုက်လည်း ပြောင်းယူနိုင်ပါသည်။ စကားဝှက်ပြောင်းရန် ဤပြောင်းလဲမှုကို တောင်းဆိုမထားဘူးလား။ စကားဝှက်အသစ်ကို တောင်းဆိုမထားပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးပါ ။
သင်၏ Facebook စကားဝှက်ပြောင်းရန် တောင်းဆိုမှုတစ်ခုကို လက်ခံရရှိထားပါသည်။
အောက်ပါ စကားဝှက် ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန် ကုဒ်ကို ထည့်သွင်းပါ -
အခြားနည်းလမ်းတစ်ခု အနေဖြင့် သင့်စကားဝှက်ကို တိုက်ရိုက်လည်း ပြောင်းယူနိုင်ပါသည်။
စကားဝှက်အသစ်ကို တောင်းဆိုမထားပါက ကျွန်ုပ်တို့ကို အသိပေးပါ။